NB Ultrathin Cantilever Mount NB767-L600 (Black) ~ ICT.com.mm
HomeNB Ultrathin Cantilever Mount NB767-L600 (Black)
NB Ultrathin Cantilever Mount NB767-L600 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ TV Size: 40″-70″ TV Weight: 100lbs (45.5kg) Material: SPCC with coating finished Carton Size: 44.1×35.4×27 cm Gross Weight: 35.8kgs Packaging: NB Colorbox VESA Standard Fits VESA: 100 x 100-400... [Learn more]
Brand: NBFilter by: Mounts & Stands
TV Size: 40″-70″
TV Weight: 100lbs (45.5kg)
Carton Size: 44.1×35.4×27 cm
Gross Weight: 35.8kgs
Packaging: NB Colorbox
VESA Standard Fits VESA: 100 x 100-400 x 600mm
အရွယ်အစား 40″ မှ 70″ အထိရှိတဲ့ TV တွေကို နံရံမှာ တပ်ဆင်နိုင်စေမဲ့ NB အမှတ်တံဆိပ် Cantilever Mount ဖြစ်ပါတယ်။ TV အလေးချိန် 100 ပေါင် (45.5 ကီလို) အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။အလူမီနီယမ်အလွိုင်းနဲ့ စတီးလ်တို့ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် တကယ့်ကိုတောင့်တင်းခိုင်မှာမှုရှိပါတယ်။ လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့ Mount ဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်၊ အတိမ်းအစောင်းပြုလုပ်နိုင်၊ ချဲ့ကားနိုင်သလို ခေါက်လို့ လှည့်လို့လည်းရတဲ့အတွက် သင်အဆင်ပြေတဲ့မြင်ကွင်းထောင့်အနေအထားတစ်ခုကို ပြုပြင်ယူနိုင်ပါတယ်။ Wall Plate Cover အပြင်ကေဘယ်ကြိုးတွေကို သေသေသပ်သပ်သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ စနစ်ကြောင့် သင့်ရဲ့ TV ဟာပိုမိုရှင်းလင်းကြည့်ကောင်းနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Made of Aluminum alloy and cold rolled steel, greatly strong. Full motion Mount, easy to fix, tilt, extend, fold and rotate your TV, best viewing angle. The wall plate cover and cable hidden system looked more luxury and nice, also made the TV cable behind your TV neatly.